Posted by အင်ကြင်းသန့် at 11:31 AM
ဟယ် ဘယ်ကလာဖတ်မကောင်းရမှာလဲ အပိုင်းအပြတ်လဲ မဖြစ်ပါဘူး...ကဗျာရေးကောင်းပါတယ် ဂျင်းက..။
လျှာဖျားက အဆိပ်ဓါးတွေချည်းပါပဲ။ အင်းးးးးးးးးးးးးးးးးး
ဂျင်းတစ်ကိုယ်စာလေး အနားလာရွာပေးပါ့မယ်ကွယ် လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့။ အောက်ဆုံးပုဒ်လေးဖတ်ပြီး ဝမ်းနည်းသွားတယ် မမျှော်တော့ဖူးပေါ့နော် မခေါ်ရင်တော့ ငိုမှာနော် ဒါပဲ
သူငယ်ချင်းလေး အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ..
အင်း မိုးကို တမင်တကာတော့ မမျှော်နဲ့ပေါ့
အချိန်တန်ရင် ကိုယ့်အတွက် အကောင်းဆုံးနဲ့ အလှပဆုံး မိုးရေစက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလာမှာပါ...
တစ်ခါတစ်လေတော့ စိတ်ပျော်စရာလေးတွေနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်အောင်နေပါ...
ဘ၀ဆိုတာ စိတ်ညစ်စရာတွေချည်းဘဲ မဟုတ်ပါဘူး..
ဒါပေမဲ့.... သစ္စာတရားတွေ ရှားပါးလာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ဓားပါးပါးတွေ များနေတာတော့ သေချာပါတယ်..
မရေး မရေးနဲ့ မျှော်လိုက်ရတာဗျာ
ရေးပြန်တော့လည်း ကောင်းလိုက်တဲ့ ခံစားမှုကဗျာလေး
ကောင်းမှကောင်း ယုံကြည်ချက်တွေ ပြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်တာ
ရာစုနှစ်တစ်ခုစာ ငိုကြွေးတာ လွင်တီးခေါင်တော့ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး
လွင်တီးခေါင်ဆိုတာနဲ့ ပထမဆုံးပြေးမြင်မိတာက ငယ်ငယ်က "ငါ... ပူလောင် ခြောက်သွေ့.. ရေဆာတဲ့နေ့.." ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို သတိရမိတယ်..
မြစ်တစ်ခုလုံးက ရာစုနှစ်တစ်ခုစာလောက် သက်တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ ပက်ကြောင်းတွေအတွက်လည်း အားလုံးစိုပြေနိုင်လောက်တဲ့ မိုးမဖြစ်တောင်မှ တစ်ကိုယ်စာမိုးလေး ရွာပါစေ...
ညီမ ကဗျာ လေးတွေကို သိပ်ကြိုက်တယ်
ညီမ ရဲ့ လွင်တီးခေါင် လေး အမြန်ဆုံး စိမ်းလန်းစိုပြေ ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးနေတယ်နော် အဲဒီအခါ ကြမှ အတိုးချပြီး စားအုန်းမယ်
မုံ့ မကြွေးတာကြာသွားလို့ အမှတ်ရသွားအောင် ပြောတယ်မှတ်ပါ
@အစ်မမိုးငွေ့>>>ဂျင်းကို ကဗျာရေးကောင်းတယ်ပြောလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မမိုးငွေ့။း)
@မိုး>>>မိုးကလည်း မိုးကိုတော့ ခေါ်မှာပေါ့။း)
@မသဒ္ဓါ>>>ဟုတ် မမ....ကျေးဇူးပဲ။း)
@ယွန်း>>>ဂျင်းအဆင်ပြေပါတယ် ယွန်းရေ....စိတ်ပူပေးလို့ကျေးဇူးပဲနော် သူငယ်ချင်းလေး။း)
@နုငယ်>>>ကျေးဇူးပဲနော် ညီမလေး။း)
@မချော>>>ဟုတ် မမ....ညီမလေးက မမစကားကိုနားထောင်ပါတယ်။း)
@မမစည်းစိမ်>>>အမြဲတမ်းညီမလေးရဲ့စာတွေကို မျှော်ပြီးဖတ်ပေးလို့ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမလေး။း)
@သော်ဇင်>>>သူက သီချင်းကြော်ငြာဝင်သွားသေးတယ်။း)
@မမရွှေစင်>>>အပြင်မှာ မုန့်မကျွေးတာကြာသွားပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော့ ထပ်ပြီး မုန့်ကျွေးဖို့ကို အမြဲသတိရနေပါတယ် မမရွှေစင်။း)
ချစ်ညီမလေး........ ကဗျာလေးက အရမ်းကောင်းတယ်။ ခုတလော စိတ်အခံက သိပ်မကောင်းတော့ ဒီကဗျာလေး ဖတ်ရတာ လွမ်းသလိုပဲကွယ်။
ပက်ကြားတွေတောင် အက်နေခဲ့ပါပေ့ါ... ဆိုတဲ့ စာကြောင်းလေးက ရင်ထဲကို ထိသွားတာပဲ။
စာမလာ သတင်းမကြား ပျောက်နေလို့ စိတ်မပူနဲ့နော်။ ဂယ်ကြီးမအားတာ...း)
@မမနွယ်>>> :( ဟင့်.. မမနွယ်များသိပ်နေနိုင်တာပဲ။ တကယ်စာမလာ သတင်းမကြား။ ညီမလေးကလည်း ဂယ်ကြီး စိတ်ပူနေတာပါ။
အင်း..သူ့အတွက်တော့ အပိုင်းအစတွေပေါ့..ငါ့အတွက်ကျတော့ ၀တ္တုရှည်တစ်ပုဒ်ပါပဲ။
copy past မလုပ်ပဲမနေနိုင်လို့ လုပ်သွားပါတယ်ဗျို့...
ညီမလေး ဂျင်းက ဒီလိုကဗျာလှလှလေးတွေလဲ ရေးတတ်တယ်လား... ချစ်စရာ...း))
ခံစားချက်နဲ့ရေးတဲ့ ကဗျာတိုင်းက အသက်ပါပါတယ်..ဂျင်းရေ..။
ဘလော့တောင် မနည်းလိုက်လည်နေရတာ ဂျင်းရေ..
:D.. အလဲ့. စကားလုံးတွေ သိပ်မိုက်တယ်ဗျာ... ဘာတဲ့..
ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုလို ဆင်ထားတဲ့ ဒီလို ကဗျာလေးတွေ သဘောကျတယ်။
အဲဒီအပိုဒ်လေးက ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်ပါပဲ။
အဟား ... ဂျင်းကဗျာဖတ်ပြီး ကျွန်တော်တောင် ကဗျာမရေးချင်တော့ဘူး ...
" အမှတ်တရ " ဆိုတာ" အမှားတရပ် " တဲ့..။မှတ်သားသင့်ပါတယ် ညီမလေးအင်ကြင်းရယ်..။ " လာမငင်ကြနဲ့ကွယ်..ဒီနွယ်တွေရှင်သန်လာသမျှ..။အရေးအသားကောင်းတဲ့ ကဗျာလေးတပုဒ်ပါ..။အားပေးနေပါတယ် အင်းကြင်းရေ....။
အင်း... ကျနော့် အထင် အမှတ်တရဆိုတာ အမှားသက်သက်ချည်း မဟုတ်ဘဲ ကောင်းတဲ့မှန်ကန်တဲ့ တစ်ခုခုလည်း ရင်ထဲကို ခွါချလို့ မရနိုင်အောင် အမှတ်တရအဖြစ် ညိကပ်စွဲမြဲလို့ နေတတ်ပါတယ် အစ်မရေ...
အဲ့ဒီ အမှတ်တရတစ်ချို့ရဲ့ အရိပ်တွေကတော့ ပြန်ပြောင်းသတိ မြင်ယောင်မိတဲ့အခါ ရင်ထဲကို ကျင်ခနဲနာကျင်တတ်လို့ ထိတ်လန့်မှုများဖြစ်တတ်ပါတယ်...
အဟိ... ရင်ကဒဏ်ရာတွေကိုတော့ ဆေးကောင်းတစ်ခွက်နဲ့ တွေ့သွားတဲ့အခါ အလိုလိုနေသာထိုင်သာ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် မမရေ...
အကြည်အသာစကားဆိုတာ ပျားရည်စက်တစ်ပေါက်ပေါ့၊ အစာပြပြီး ငါဖမ်းတာမျိုးလို ရသွားရင် ကင်လိုကကင် ကြော်လိုကကြော် ပြုတ်လိုကပြုတ် မဟုတ်မဟတ်လုပ်သွားခံရတဲ့အခါ ဘယ်သူမဆို နာကျင်တာပေါ့...
အရာရာကို မတန်ဘူးဆိုတာကိုတော့ ပြောပါနဲ့ ငုတ်တိုပင်တောင်မှ ငှက်လေးတစ်ကောင်ကောင် အတွက်တော့ နားခိုစရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေ...
မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာ မရှိဘူးဆိုပေမယ့် ထင်တဲ့ လုပ်တဲ့အရာရာတိုင်း ဖြစ်မလာတတ်ပါဘူး....
မိုးရေစက်လေးတွေကို ဆာလောင်နေတဲ့ လွင်တီးခေါင်ပြင်တစ်ခုဟာ အမှတ်မထင် မိုးရေစက်လေးတစ်ပေါက်လောက်တော့ အဆာပြေသောက်သုံးလို့ ရနိုင်ကောင်းပါတယ် အစ်မရေ... ကိုလေးဖြူသီချင်းထဲက စိတ်မလျှော့နဲ့ မင်းစိတ်လျှော့နဲ့ ဆိုတာလေ ကြားဖူးတယ် မဟုတ်လား....
အမေလေး... မပီကလာ ပီကလာနဲ့ ရေးချလိုက်တာ ကော်မန့်က ခုမှပဲ ရေးပြီးတော့တယ်...
ပေး.. မုန့်ဖိုး... လက်ညောင်းခ...း))
QUITE GOOD. :)
စိတ်အနာတရ ဖြစ်ရတာတွေချည်းပါပဲ" မှန်လိုက်လေ ညီမလေး...
အောက်ဆုံးအပိုဒ်လေးက heart ထိတယ်ကွယ်
ကွင်းဆက်မိလိုက်တာ ဦးစံရှား တရားခံလိုက်သလိုပဲ...
အင်ကြင်းရေ....ဒီလောက်ချောတဲ့ ငါ့ညီမကို ဘယ်သူတွေက အဆိပ်ဓါးနဲ့ မွှန်းသွားသတုန်း လိပ်စာပေးလိုက် အစ်ကိုကြီး သွားရှင်းလိုက်မယ် သူ့ခြံထဲက မြက်တွေကို :)
ကောင်းလိုက်တဲ့ကဗျာလေး ခံစားမှုတွေကိုရှေတန်းတင်ရင် ခံရတဲ့သူက ရာစုနှစ်တစ်ခုစာလောက် ခံစားရတတ်တာ ဆိုတာကိုတော့နှစ်သက်တယ်။ ခံစားရလွန်းတော့လည်း မဲ့မဲ့လေးနဲ့ ပြုံးတတ်လာတာပေါ့နော်။
ကဗျာကို ခံစားသွားပါတယ်၊ ခုတလောမိုးတွေတော်တော်သည်းနေတယ်၊ တစ်ကိုယ်စာ လွင်တီးခေါင်တော့မဖြစ်ပါစေနဲ့၊ မိုးစိုခံလိုက်ပေါ့….
ကဗျာလေးက အရမ်းအသက်ဝင်တာဘဲ။ အပိုဒ်တိုင်း အပိုဒ်တိုင်း စကားလုံးတွေ လတ်ဆတ်တယ်။ လန်းဆန်းတယ်။ ပေါ်လွင်တယ်။
မီးတောင်ကြီး လောက်တော့ မဆိုးသေး ပါဘူး...
မီးရောင်လေး လက် လာလောက်မှာပါ ...
လွင်တီးခေါင်ဆိုလို့ ချစ်စမ်းမောင်ကြီးတောင် သတိရသွားသေး ...
အို.. ဘာပြောကောင်းမလဲ တို့ကတော့ ခွင့်လွှတ်ပြီးသားပဲ..
အရမ်းကို ခံစားချက်ပြင်းထန်တဲ့ စကားလုံးလေးတွေပါ..
မိုးတွေသည်းသည်းမဲမဲ ရွာတတ်တဲ့ ဒီရာသီတွေမှာ ဘာလို့များကိုယ်တွေအတွက် မိုးခေါင်နေပါလိမ့်..
ကောင်းလိုက်တာ ကဗျာလေးက ကဗျာ တွေကို မုန်းတဲ့သူတောင် ဟတ်ထိသွားတယ်... အဟီး...
ငါ့တစ်ကိုယ်စာက လွင်တီးခေါင်ဖြစ်နေခဲ့ရတော့တယ်။ ။ အဲတာလေး အကြိုက်ဆုံးပဲငါ့ညီမ...
တကယ် ဆရာကြီးတွေရဲ့ခြေရာကိုမှီတယ်ကွာ... :D
အခုမှရောက်ဖူးတာ၊ ကဗျာတွေ အကုန်သိမ်းကျုံးဖတ်သွားတယ်၊ အကုန်ကြိုက်တယ်။ နောက်ဆို ခဏခဏလာဖတ်မယ်။ များများရေးနော်၊ ခံစားချက်တွေ ဖွင့်ထုတ်လိုက်ရလို့ နေသာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ကဗျာလေး အရမ်းကောင်းတယ် ဂျင်းရေ...
ကဗျာလာဖတ်သွားတယ်နော်။ ၀င်ရတာအဆင်မပြေတဲ့ ကျော်ခွတွေနဲ့မို့ အမြဲမရောက်တာပါ။ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေ အင်ကြင်းရေ...။
ဖတ်ကောင်းလွန်းလို့ ဖလမ်းဖလမ်းတောင် ထတယ်